Ahoana ny fomba hametrahana ny mpanamarina ny tsipelina ao amin'ny iOS | Vaovao IPhone
Ahoana ny fomba hametrahana ny mpanamarina ny tsipelina amin'ny iOS
Paul Aparicio | | maro
El spell checker o AutoCorrect ho an'ny finday dia iray amin'ireo zavatra tianay sy halainay amin'ny refy mitovy. Tianay izany satria mamela anay hanoratra haingana ary, rehefa zatra ny efijery finday isika, dia azo atao nefa tsy mijery ny efijery. Halantsika izy satria indraindray manana ny fiainany manokana izy ary manoratra ireo teny izay toa tsara aminy fa tsy ireo tadiavinay. Na dia toerana ifotony aza izy io dia misy mpampiasa maro izay misalasala ny amin'ny fomba hitantanana ity fitaovam-panoratana ity.
Ny olana amin'ny autocorrect dia ny fanandramany hampiasa fiteny diso loatra. Ho fanampin'izany, ny iPhone, amin'ny maha vokatra Apple azy tsara, dia tsy tia teny ratsy, noho izany dia mila soratantsika tsara izy ireo raha tsy tiantsika ny handefa zavatra misy dikany hafa tanteraka. Etsy ankilany, lojika raha any teny samy hafa hitoviana amin'ny fiteny mitovy, toy ny tranga "kely" izay ampiasaina ao Albacete hitenenana hoe "kely". Amin'ireto tranga ireto dia mety ho hevitra tsara ny hanafoanana ny mpanitsy, dingana tsotra be izay hazavainay etsy ambany.
1 Ahoana ny fomba famonoana ny mpanamarina ny tsipelina iPhone
2 Ahoana ny fanovana ny fiteny amin'ny mpanamarina ny tsipelina
3 Ahoana ny fomba hanampiana fiteny
4 Ahoana ny fomba hampandehanana ny maso ny tsipelina Catalan
5 Inona ny atao hoe "Spell Check"?
Ahoana ny fomba famonoana ny mpanamarina ny tsipelina iPhone
Araka ny efa nolazaiko tetsy ambony, alefaso ny autocorrect Tsotra be izy io. Saingy, toy ny mahazatra, tsy maintsy mandinika mitady ny toerana misy anao ianao na mahafantatra ny lalana. Hofoaninay io amin'ny alàlan'ireto dingana ireto:
Manokatra ny fikirana izahay.
Manaraka izany dia mankany amin'ny Jeneraly isika.
Misosa isika ary miditra amin'ny Kitendry.
Farany, tsy maintsy foanana ny switch, lever na Toggle an'ny Autocorrector.
Ahoana ny fanovana ny fiteny amin'ny mpanamarina ny tsipelina
Ovay ny fitenin'ny mpanitsy Mora dia mora ny tsipelina, fa mety mendrika hijerena ny teboka manaraka aloha. Na ahoana na ahoana, mba hanovana ny fiteny dia manana safidy roa isika:
Mikasika ny baolina eran'izao tontolo izao isika ary hiovaova ho iray ny fiteny (ohatra, Espaniola, Anglisy, Espaniôla…).
Mikasika sy mitazona ny baolina eran'izao tontolo izao izahay hahita ny fiteny rehetra nampiasainay niaraka tamin'ny safidy hamonoana ny diksionera maminavina.
Ahoana ny fomba hanampiana fiteny
Mba hanovana ny fiteny araka ny nohazavaina tamin'ilay teboka teo aloha dia tsy maintsy aloha manampy fiteny vaovao amin'ny fitendry. Ity dia mandeha toy izao manaraka izao: manomboka amin'ny tanjona aloha fa ny iPhone, iPod Touch na iPad azontsika atao dia afaka manitsy izay soratantsika amin'ny Espaniôla, saingy, na inona na inona antony, dia tianay koa ny hanao izany amin'ny teny anglisy anglisy. Ny zavatra voalohany tokony hataontsika amin'ity tranga ity dia ny manampy an'io fitendry keyboard io. Mba hisorohana ny fisafotofotoana dia omeko antsipirihany ireo dingana manaraka:
Toy ny rehefa manafoana ny AutoCorrect dia manokatra ny setting isika.
Manaraka izany, mankany amin'ny Jeneraly isika.
Ny zavatra manaraka dia ny miditra amin'ny Keyboard. Raha mbola tsy nokasihinao mihitsy izy io, eo anilany dia hahita 2, iray izay fitendry ny fiteninao ianao ary faharoa dia ny an'ny Emoji.
Manaraka izany dia mila manindry ny Add keyboard vaovao isika. Ho hitantsika fa aseho amintsika izay rehetra ananantsika.
Ny zavatra manaraka tokony hataontsika, lojika dia ny fisafidianana ny fiteny tianay ampiana, izay amin'ity tranga ity dia "Anglisy". Raha misy ny iray izay avy any Angletera, ny iray izay tsy mametraka na inona na inona dia ny anglisy izay ipetrahan'i Apple, izany hoe Etazonia.
Izao satria efa nampianay ilay fiteny, dia efa azontsika izany, fa amin'ny fomba ahoana no hampiasana azy? Eny, tsy maintsy mandeha any amin'izay rindranasa izay ahafahantsika manoratra.
Ary farany, tsy maintsy misafidy ilay fiteny isika amin'ny alàlan'ny fikasihan-tanana ny baolina eran'izao tontolo izao izay hiseho eo akaikin'ilay tarehy fidirana amin'ny Emoji.
Ahoana ny fomba hampandehanana ny maso ny tsipelina Catalan
Ity dia fangatahana iray izay nanontanianao anay koa. Tsy misy fomba manokana ampandehano ny mpanamarina ny tsipelina Catalan, satria miresaka momba ny fiteny ofisialin'ny Saikinosy Iberia isika, noho izany dia natao tamin'ny fomba fanaovanay azy io amin'ny fiteny hafa amin'ny maro izay ananantsika. Saingy satria ny fangatahana dia ho an'ny fiteny manokana, raha tsy namboarinay ny autocorrect mba tsy hanitsiana ireo teny Katalana dia tokony hampivondronantsika izay rehetra nohazavaina tamin'ireo teboka teo aloha:
Raha tsy ampandehanana azy io, lojika izany, tsy maintsy ampodintsika ny autocorrect araka izay efa nohazavaintsika teo aloha.
Izahay dia manao izay efa nohazavaiko tamin'ny hevitra teo aloha, fa ny manova ny dingana amin'ny fisafidianana ilay fiteny fotsiny, amin'izay fotoana izay, amin'ny lôjika, dia hikaroka ny "Catalan" isika ary hanampy azy.
Farany, hilalao amin'ny baolina eran'izao tontolo izao isika ary hisafidy «Catalan». Raha mikasika ny baolina eran'izao tontolo izao isika nefa tsy mitazona azy dia hiova eo anelanelan'ny fiteny izany ary ho fantatsika fa nahatratra Catalan izany rehefa niseho teo amin'ny bara habakabaka ny «Catalan» (zavatra nanjavona segondra roa taorian'ny nisehoany).
Inona ny atao hoe "Spell Check"?
Amin'ny alàlan'ny default, ny fitaovana iOS rehetra dia samy manana AutoCorrect sy AutoCorrect. fanamarinana ny tsipelina. Amin'izany fomba izany, rehefa hanoratra teny tsy izy isika, raha mahita iray ao amin'ny rakibolana mety mifanaraka aminy dia hanova azy ho azy ho antsika izy. Fa raha te-hametraka teny diso tsipelina ohatra isika, dia azontsika atao amin'ny alàlan'ny fanindriana ny "x" izay miseho eo akaikin'ilay teny naroso, izay hahafahantsika mamela ny teny nosoratanay. Ohatra, raha mametraka ny teny hoe "vurro" isika (miala tsiny aminareo izay mitomany rà ankehitriny) ary tratrantsika ny "x", dia hiseho eo amin'ny boaty fanoratana misy tsipika mena eo ambaniny.
Nosarahina ireo safidy raha tiantsika ny hanana azy toy ny mahazatra amin'ny solosaina. Amin'ny solosaina ahafahantsika manoratra amin'ny klavie lehibe kokoa ary miaraka amina fampiononana bebe kokoa, heveriko fa tsara indrindra ny manamarina ny fanoratantsika izay soratantsika ary isika mampitandrina ny amin'ny lesoka mety hitranga, fa aza manova ny teny ho anay. Raha ny marina dia efa nisedra azy tamin'ny Mac efa ela lasa izay aho ary nitendry "Drop Simulator" indroa rehefa te-hanoratra "Goat Simulator". Na dia ampidirina tsy misy fanao aza izy ireo dia misaraka ny safidy hahafahantsika manapa-kevitra hoe inona no karazana fanampiana tadiavintsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Ahoana ny fomba hametrahana ny mpanamarina ny tsipelina amin'ny iOS
Elena Ferrera dia hoy izy:
Ny tadiaviko dia ny tsy hanontanian'ilay mpanamarina ny tsipelina raha toa ka AZA MANOTA AZY AHO. Misy mahalala ny fomba fandefasako azy io?
Valiny tamin'i Elena Ferreira
Tena tsy mahazo aina amiko ny mangataka amin'ny feo avo (indrindra raha misy manandrana mitendry birao amin'ny fahanginana aggg), noho izany dia voatery nisafidy ny: 1) Mihazakazaka ny mpanara-tsipelina (tena tsy mahazo aina) 2) Mangina ny rehetra telefaona (mbola tsy mahazo aina kokoa). Izaho dia nitady fampianarana amin'ny Internet hanampy ahy amin'ity lohahevitra ity nandritra ny fotoana kelikely, saingy tsy hitako ilay izy :(.
Miarahaba anao Elena
Nametraka wuasar amin'ny solosaiko na pc aho, te hahafantatra ny fomba fametrahana azy:
Ahoana no ahafahako mampita rakitra wuasar amin'ny namako vaovao na namana maromaro, nefa tsy asiako ao anaty vondrona iray
Tsy mahita fomba mety hidirana sy hanovana ireo teny fanamarinana aho.
Azo atao ihany ny mametraka / manala azy.
Ary foano ny nanampy.
Saingy tsy hitako izay fomba rehetra anehoako an-tsaina ny hadalana
Toy ny teny hoe Libertad sy La Paz anarana mety foana
Phu dia hoy izy:
Manana iPhone X aho, iOS 15.2, ary rehefa manetsika ny fitendry Catalan aho dia tsy hita intsony ny bara vinavina, ary tsy mamela ahy hijery tsipelina koa izany ... inona no mitranga???
Apple dia hanolotra ny lanjany isan-telo volana amin'ny 25 aprily
Miitomo, lalao voalohany an'ny Nintendo ho an'ny iOS, dia ho tonga amin'ny 31 martsa any amin'ny firenena maro